ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြင်းပွားစရာ အဖြစ်ခဲ့ဆုံးသော ပန်းချီကား ဖန်တီးမှုလက်ရာ (၈) ခု | Buzzy
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြင်းပွားစရာ အဖြစ်ခဲ့ဆုံးသော ပန်းချီကား ဖန်တီးမှုလက်ရာ (၈) ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြင်းပွားစရာ အဖြစ်ခဲ့ဆုံးသော ပန်းချီကား ဖန်တီးမှုလက်ရာ (၈) ခု အကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၊ ဒီပန်းချီကားတွေဟာ ဘာကြောင့်ဆိုးဝါးစွာ ဝေဖန်ခြင်းခံရတာလည်းဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပန်းချီကားကို အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်Cedric Chambers က ဖန်တီးခဲ့တာပါ ။ ဒီပန်းချီးကားမှာ နယူးယောက်ခ်က မျှော်စင်ညီနောင်ကို နောက်ခံထားပြီး သခင်ယေရှုကို large Darth Vader က သယ်ဆောင်လာပုံမျိုး ဖန်တီးထားတာမို့ အငြင်းပွားဖွယ် ပန်းချီကား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
2. Goddess Lakshmi Naked On Shri Ganesh’s Head
Maqbool Fida Husain တစ်နည်း အိန္ဒိယပီကာဆိုလို့ လူသိများတဲ့ ဒီပန်းချီဆရာရဲ. ဒီလက်ရာဟာ လက်ရှိခေတ်ရဲ. အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံး ပန်းချီကားအဖြစ် ရှိနေပါတယ် ။ ဒီပန်းချီကားမှာ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အမျိုးသမီးကို မတူညီတဲ့ လိင်ပုံစံတွေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Husain ဟာ ဒီပန်းချီကားကြောင့် အမှုရှစ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
3. The Guitar Lesson
ဒီပန်းချီကားကိုတော့ ပိုလန်-ပြစ်သစ်နွယ်ဖွား ပန်းချီဆရာ Balthasar Klossowski de Rola ဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ. လိင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုေ၇းစွဲဖူးပါတယ် ။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ပန်းချီကားမှာတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးအသီးကြီးတို့ကြားက အချစ်ကို သရုပ်ဖော်ထားသလိုပါပဲ။ ဒီအနေအထားက ဂီတာပုံနဲ့ ဆင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
Olympia ပန်းချီကားဟာ Edouard Manet ရဲ. လက်ရာဖြစ်ပြီး ဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓိကထားရေးဆွဲထားကာ Goya ရဲ. La Maja Desnuda ပန်းချီကားကို ထပ်မံဆင့်ပွား ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
5. One Nation Under Socialism
ဒီပန်းချီကားကို Jon McNaughton က ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အကြီးအကျယ် ဝေဖန်မှုခံနေရပါတယ် ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီပန်းချီကားထဲမှာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို မကောင်းတဲ့သူ အဖြစ်ပုံဖော်ထားပါတယ် ။ အိုဘားမားဟာ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မီးရှို့နေတဲ့ပုံကို သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားပါတယ်။
Myra ပန်းချီကားကို Marcus Harvey က Myra Hindley ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ. ပုံရိပ်ကို handprints of little kids နဲ့ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာပါ ။ Ian Brady နဲ့ Myra Hindley တို့နှစ်ဦးဟာ ၁၉၆၃ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၅ ခုနှစ်အကြား အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၇ ကြားရှိတဲ့ ကလေးငယ် ၅ ဦးကို သတ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေပါ ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းက ဒီလက်ရာကို Royal Academy of Art မှာ ပြသတုန်းက များစွာသော ပြည်သူတွေဟာ ဒီပန်းချီကားစကို မင်တွေ ကြက်ဥတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။
7. The Black Christ
၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်းက တောင်အာဖရိက အနုပညာရှင် Ronald Harrison က သခင်ယေရှုကို လူမည်းတစ်ယောက်အဖြစ် ပုံဖော်ထားတဲ့ လက်ရာပါ ။ ဒီပန်းချီကားထဲက သခင်ယေရှုကို African National Congress ခေါင်းဆောင် Albert Luthuli အဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ် ။ Albert ကို သခင်ယေရှုအနေနဲ့ ကားစင်တင်ထားပြီး အနားမှာတော့ ယခင် Justice Minister John Vorster နဲ့ Prime Minister, Hendrik Verwoerd တို့ကို ရောမစစ်သားတွေ အဖြစ် သရုပ်ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ဒီပန်းချီကားကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကိပ်တောင်း က St. Luke’s ဘုရားကျောင်းမှာ ပြသခဲ့ပြီး အနုပညာရှင်ကိုတော့ ရဲတွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
8. Lord Krishna With Bikini Clad Women
ဒီ ဝေဖန်စရာ ပန်းချီကားကိုတော့ အာသံအခြေစိုက် ပန်းချီဆရာ Akram Hussain က ဟိန္ဒူတို့ရဲ. ဘုရားသခင် Lord Krishna ကို ဘီကနီဝတ် အမျိုးသမီး ၇ ဦးနဲ့ ဘားမှာ ရှိနေဟန် ရေးဆွဲထားတာပါ။